Nnwom 28 AKCB - Salmos 28 NVI-PT
1Wo na misu frɛ wo,
Awurade me Botan;
nsiw wʼaso wɔ me ho.
Sɛ woyɛ komm a,
mɛyɛ sɛ wɔn a wɔasian kɔ amoa mu no.
2Tie me mmɔborɔsu
bere a mefrɛ wo apɛ mmoa,
bere a mema me nsa so
kyerɛ wo Tenabea Kronkron hɔ.
3Mfa me mfra amumɔyɛfo mu ntwe me nkɔ,
mfa me nka wɔn a wɔyɛ bɔne no ho.
Wɔne wɔn yɔnkonom kasa fɛfɛ,
nanso wɔde ɔtan sie wɔn koma mu.
4Twe wɔn aso wɔ nea wɔayɛ no so;
wɔn adwuma bɔne no so;
tua nea wɔde wɔn nsa ayɛ so ka
na fa nea ɛfata wɔn san bra wɔn so.
5Sɛ wommu nea Awurade ayɛ
ne nea ɔde ne nsa ayɛ no nti
ɔbɛbrɛ wɔn ase
na ɔremma wɔnnsɔre bio.
6Ayeyi nka Awurade,
efisɛ watie me mmɔborɔsu.
7Awurade ne mʼahoɔden ne me nkatabo
me koma wɔ ne mu ahotoso, na ɔboa me.
Me koma di ahurusi
na mede dwonto bɛda no ase.
8Awurade yɛ ahoɔden ma ne nkurɔfo;
ne nkwagye nsraban ma nea wɔasra no ngo.
9Gye wo nkurɔfo na hyira wʼagyapade;
yɛ wɔn hwɛfo, na wo ne wɔn nnantew afebɔɔ.
AKCB : Nnwom 28
1A ti eu clamo, Senhor, minha Rocha;
2Ouve as minhas súplicas
3Não me dês o castigo reservado para os ímpios
4Retribui-lhes conforme os seus atos,
5Visto que não consideram os feitos do Senhor
ele os arrasará
e jamais os deixará reerguer-se.
6Bendito seja o Senhor,
7O Senhor é a minha força e o meu escudo;
8O Senhor é a força do seu povo,
9Salva o teu povo e abençoa a tua herança!